Aiza no hizarana? Toeram-pisakafoanana tsara indrindra any St. Matthews
Etazonia Kentucky Louisville
Restaurants in St. Matthews
St. Matthews dia feno safidy fisakafoana mahaliana sy mahavariana. Ny trano fisakafoanana eto amin'ity lisitra ity dia safidy samihafa. Ankoatra izany, ny sasany amin'izy ireo dia ny toeram-pisakafoanana tiako indrindra ao an-tanànan'i Louisville.
Raha misy havana Rumbas vitsivitsy ao an-tanàna, ny voalohany dia nisokatra tamin'ny 2004 tao an-tsain'i St. Matthews. Nanomboka tsikelikely izy io ary nanitatra tsikelikely, nandritra ny fotoana rehetra izay nanandrana sakafo mahandro Kiobàna. Afangaro amin'ny salady, ny seafood, ny sandwich Kiobana, ary ny karazan-kiady. Fialam-boly misy mozika mavitrika, mpiasa matanjaka ary manao raharaham-barotra.
Banchan any Korea II ao Louisville.
Ao amin'ny tranom-barotra ambany ravin-tseranana mitovy amin'ny Havana Rumba, i Charim dia manolotra sakafo tena izy Koreana. Raha efa nivoaka tamin'ny Korean ianao, fantatrao fa ny banchan dia ampahany sosialy sy mahafa-po amin'ny traikefa. Banchan (izay midika hoe menaka masira) dia singa misy tsipika kely nozaraina tamin'ny latabatra. Matetika no misy karazana kimchi, legioma maromaro, spinach efa voapoizina, ary ranom-boankazo. Ho an'ny fandraisanao anjara, Bibim Bab dia tena tiany.
Ny China Bistro an'i PF Chang
PF Chang's dia trano fisakafoanana shinoa avo lenta izay misy akanjo am-bifotsy sy serivisy, izay mihamitombo amin'ny sakafo mahavariana mahatsikaiky avy any Shina, voaomana amin'ny fitaovana tsara indrindra. Raha tsy fantatrao izany alohan'ny hihinana azy ao amin'ny PF Chang, dia mety tsy hihevitra ianao hoe trano fisakafoanana izany. Raha ny marina, ny zava-drehetra sy ny fifantohana amin'ny antsipirihany dia ny zava-drehetra avy amin'ireo andry fotsy mitsangana eo amin'ny andaniny roa amin'ny fidirana ao amin'ny trano fandraisam-bahiny amin'ny sakafo matsiro.
Ny Ruth's Chris dia fikarakarana sakafo mahasalama mahasalama amin'ny fanaka sy ny seafood. Iray amin'ireo toetra tena tsara indrindra ao amin'ny Louisville Ruth's Chris Steakhouse ny fametrahana azy eo an-tampon'ny Tilikambon'i Kaden - ny mpankafy tsy vitan'ny sakafo mahavelona fotsiny, fa koa ny mahita ny fomba fijery mahavariana an'i Louisville amin'ny East End. Avo avo ny vidiny, fa ny vidin'ny sakafo dia tena mendrika ny vidiny.
Ny Napa River Grill dia tsy manam-paharoa ao amin'ny faritra Louisville amin'ny fanompoam-pisakafoana mahazendana Kalifornia sy Pasifika. Iray amin'ireo atleta lehibe indrindra ao amin'ny Napa River Grill ny sakafo fanatanjahan-tena izay mampiavaka ny trondro vaovao, trondro, pasta ary salady, ary amin'ny vanim-potoana mafana dia ny Napa River Grill dia toerana mahafinaritra satria misy iray amin'ireo toerana fisakafoanana tsara indrindra any ny tanàna iray manontolo.
Ity dia eo amin'ny sisin'ny St. Matthews, ao amin'ny manodidina ny Crescent Hill, ary raha tsy eo amin'ny lisitry ny Top 10 Frankfort Ave. Toeram-pisakafoanana , azo antoka fa tokony. Raha efa nandalo an'i Frankfort Avenue Beer Depot ianao, dia sambokely ianao no nisoka ny setro-tsigara tao anaty rivotra. Misy ireo mpifoka sigara lehibe roa ivelan'ny orinasa mampiasa fomba fanao sigara sy malefaka mba hanamboarana ny sasany amin'ireo sakafo tsara indrindra ao an-tanàna. Fantatra amin'ny taolan-tehezany sy ny raviny, izy ireo ihany koa dia manana mpambom-bary ao amin'ny sakafo . Ny trano fandraisam-bahiny dia tena malama amin'ny trano fandroana ary raha ny fianakaviana dia raisina an-tany maro dia maro ny olona manana labiera mangatsiaka na midoboka amin'ny vera balsama. Na dia misy lalao roa ao ambadika aza (lakandranon'ny hazavana sy tohanana golf kely) raha tianao ny ho be atao alohan'ny sakafo.
Ny trano fisakafoanana fianakaviana iray, Silvio's dia sehatra fandraisana an-tsokosoko izay manolotra sakafo amerikana amerikana. Ho an'ny mpanamory iray, ny bola baoritra dia tena tia, bisy telo feno feno mozzarella baolina ary manompo miaraka amin'ny saosy marinara mankany ambony. Ho an'ny fidiranao, misafidiana amin'ny Veziela Parmesan, Chicken Parmesan, divay pasta isan-karazany, ary bebe kokoa. Ny mpiasa dia tena manintona ary aza gaga raha mitsahatra amin'ny tomponao eo akaikin'ny latabatra ny tompony mba hahazoana antoka fa mankafy ny sakafonao ianao.
Ok, ity trano fisakafoanana ity dia ara-teknika any Lyndon, toeram-ponenana any Louisville any atsinanan'i St. Matthews, saingy raha any amin'ny faritra ianao ary amin'ny toe-javatra mahazatra ny sakafo Meksikana, dia miasa ilay fiara. Misy karazana guacamole vitsivitsy ao amin'ny sakafo. Amin'ny ankapobeny dia safidy nentim-paharazana vita miaraka amin'ny tongolobe, voatabiha sy cilantro ary safidy manintona mampiavaka ny voankazo poblano, voankazo ary voankazo mena. Na inona na inona safidy, dia azo antoka fa ho matsiro. Ny trano fisakafoanana anabavin'izy ireo El Taco Luchador, dia ao Louisville ao amin'ny Baxter Ave. Ny toeram-pisakafoanana roa dia ao anatin'ny lisitr'ireo Top 10 Meksikana Restaurants ao Louisville, KY .
Fanamarihana: Ny lahatsoratr'i Jessica Elliott dia navoakan'ny manam-pahaizana amin'izao fotoana izao tamin'ny Novambra, 2016.
Details momba ny oram-batravatra any Louisville
Top 10 Toeram-ponenana Mankany Ao Louisville
Top 10 Trips avy any Louisville
5 Soso-kevitra ho an'i Kentucky Derby Attire
Fiakarana ho an'ny Kentucky Derby
Ny tanàna tsara indrindra any Barikadimy any Amerika Avaratra
Fialam-boly fianakaviana tsara indrindra any Kalifornia
Zava-dehibe ny hitsidihana an'i Culebra
Taxi any Però
Zavatra tsy ampy amin'ny Pack grika
Top Museums any Seattle / Tacoma
Toeram-ponenan'ny Tendrombohitra Romantic, Hotels, ary Inns
Ny Items 8 Best Delsey Baggage mba hividy amin'ny 2018
Caesars Brookdale eo amin'ny Farihy